Chineke họpụtara Saịrọs ka o merie Babịlọn (1-8)
Ụrọ ekwesịghị isesa onye ji ya na-akpụ ihe okwu (9-13)
Mba dị iche iche ga na-akwanyere ndị Izrel ùgwù (14-17)
Ihe niile Chineke kere dị mma, ihe niile o kwuru ga-emezukwa (18-25)
Chineke kere ụwa ka ndị mmadụ biri na ya (18)
45 E nwere ihe mụnwa bụ́ Jehova na-agwa Saịrọs, bụ́ onye m tere mmanụ.+ M seere ya n’aka nri ya,+Ka m jiri ya weda mba dị iche iche ala,+Jiri ya napụ ndị eze ihe ha ji akpa ike,*Jirikwa ya meghee ọnụ ụzọ nwere ibo abụọ,Ka a ghara imechi ọnụ ụzọ ámá ya emechi. M gwara ya, sị: 2 “M ga-aga n’ihu gị,+M ga-emekwa ka ugwu dị iche iche dị larịị. M ga-akụri ibo ụzọ ndị e ji ọla kọpa rụọ. M ga-agbajikwa ígwè e ji atụchi ha.+ 3 M ga-enye gị akụ̀ ndị dị n’ọchịchịrị,Nyekwa gị akụ̀ ndị e zoro n’ebe dị iche iche zoro ezo.+ Ihe a ga-eme ka ị mara na m bụ Jehova,Bụ́ Chineke Izrel, onye na-akpọ gị aha gị.+ 4 M na-akpọ gị ahaN’ihi ohu m Jekọb nakwa n’ihi Izrel bụ́ onye m họọrọ. M ga-eme ka aha gị na-ede ude n’agbanyeghị na ị maghị m. 5 Abụ m Jehova. E nweghị onye ọzọ. E wezụga m, e nweghị Chineke ọzọ dịnụ.+ M ga-enye gị ike* n’agbanyeghị na ị maghị m. 6 Ihe a ga-eme ka ndị mmadụ maraNa e nweghị onye ọzọ ma e wezụga m,+Malite n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda ya. Abụ m Jehova. E nweghịkwa onye ọzọ.+ 7 M na-eke ìhè,+ na-ekekwa ọchịchịrị.+ M na-eme ka e nwee udo,+ na-emekwa ka e nwee ọdachi.+ Mụnwa, bụ́ Jehova, na-eme ihe a niile. 8 Eluigwe, mee ka mmiri zoo.+ Ka ezi omume si n’ígwé ojii zoo ka mmiri. Ka ala meghee, mịakwa nzọpụta ka mkpụrụ,Ka o meekwa ka ezi omume pulite n’otu mgbe ahụ.+ Ọ bụ mụnwa bụ́ Jehova mere ka ọ dị otú ahụ.” 9 Onye na-esesa Onye kere* ya okwu ga-ata ahụhụ,Maka na ọ dị ka mpekere ite ụrọ wụsa n’alaOtú mpekere ite ụrọ ndị ọzọ wụsa. Ụrọ ò kwesịrị ịsị Ọkpụite:* “Gịnị ka ị na-akpụ?”+ Ka ihe ị rụrụ ò kwesịrị ịsị na i nweghị aka?* 10 Onye na-asị nna ya: “Gịnị mere i ji mụọ m?” ga-ata ahụhụ. Onye na-asịkwa nne ya: “Olee ụdị nwa ị mụrụ ihe a?”* ga-ata ahụhụ. 11 Jehova, bụ́ Onye Nsọ Izrel,+ Onye kpụrụ ya, kwuru, sị: “Ọ̀ na-eme unu obi abụọ ma ihe m kwuru ọ̀ ga-eme? Ùnu ga-enye m iwu gbasara ụmụ m+ na ọrụ aka m? 12 Ọ bụ m kere ụwa,+ keekwa ndị mmadụ bi na ya.+ Ọ bụ m ji aka m gbasaa eluigwe.+ M na-enyekwa kpakpando na ihe niile dị n’eluigwe iwu.”+ 13 “Emeela m ka otu onye pụta maka na m na-eme ezi omume.+ M ga-emekwa ka ihe ọ bụla ghara ịnọchiri ya ụzọ. Ọ bụ ya ga-arụ obodo m.+ Ọ ga-ahapụkwa ndị m a dọọrọ n’agha ka ha laa.+ Ọ gaghị asị ka a kwụọ ya ụgwọ. Ọ gaghịkwa anara aka azụ.”+ Ọ bụ Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru ihe a. 14 Jehova kwukwara, sị: “Uru* ndị Ijipt na ngwá ahịa* ndị Etiopia nakwa ndị Siba, bụ́ ndị toro ogologo,Ga-abịakwute gị. Ha ga-aghọkwa ndị gị. Ha ga-ebu ịga a tụrụ ha na-eso gị n’azụ. Ha ga-abịa kpọọrọ gị isiala.+ Ha ga-agwa gị, sị, ‘N’eziokwu, Chineke nọnyeere gị.+ E nweghịkwa onye ọzọ. Chineke ọzọ adịghị.’” 15 Chineke Izrel, bụ́ Onye Nzọpụta,+N’eziokwu, ị bụ Chineke. Ọ bụghị mgbe niile ka ị na-eme ka a mara ihe ị na-eme. 16 Ihere ga-eme ndị na-apị arụsị. A ga-emenyekwa ha niile ihere. Ha niile ga na-agagharị, ihere eju ha ihu.+ 17 Ma, Jehova ga-azọpụta unu, bụ́ ndị Izrel, ruo mgbe ebighị ebi.*+ E nweghị mgbe ihere ga-eme unu. E nweghịkwa mgbe a ga-emenye unu ihere.+ 18 Jehova, Onye kere eluigwe,+ Onye bụ́ ezi Chineke,Onye kere ụwa, kesie ya ike,+O keghị ya na nkịtị,*Kama o kere ya ka ndị mmadụ biri na ya.+ Ọ sịrị: “Abụ m Jehova, e nweghị onye ọzọ. 19 Anọghị m ebe zoro ezo kwuo okwu,+ ya bụ, ebe gbara ọchịchịrị. Agwaghịkwa m ụmụ* Jekọb, sị,‘Chọọnụ m na nkịtị.’ Abụ m Jehova, onye na-ekwu ihe bụ́ ezi omume, na-emekwa ka a mara ihe ziri ezi.+ 20 Ndị si ná mba dị iche iche gbapụ,Zukọtanụ bịa. Bịanụ nso.+ Ndị na-ebugharị arụsị a pịrị apịMa na-arịọ chi na-enweghị ike ịzọpụta ha arịrịọ amaghị ihe ọ bụla.+ 21 Kwuwenụ ihe unu chọrọ ikwu. Zaranụ ọnụ unu. Nweenụ otu olu n’izu unu gbara. Ònye kwuru kemgbe ụwa na ihe a ga-eme? Ònye kpọsara ya kemgbe oge ochie? Ọ́ bụghị mụnwa, bụ́ Jehova? E nweghị Chineke ọzọ dị ma e wepụ m. E nweghị Chineke ọzọ bụ́ onye ezi omume na Onye Nzọpụta+ ma e wepụ m?+ 22 Ndị niile nọ na nsọtụ ụwa, bịakwutenụ m ka m zọpụta unu,+N’ihi na abụ m Chineke. E nweghịkwa Chineke ọzọ dị.+ 23 Ejirila m onwe m ṅụọ iyi,Okwu ahụ m ji ọnụ m kwuo bụ eziokwu. E nweghịkwa ihe ga-eme ka ọ ghara imezu.+ Ikpere niile ga-egburu m n’ala. Ire niile ga-aṅụkwa iyi na ha ga na-akwado m.+ 24 Ha ga-asị, ‘N’eziokwu, Jehova na-eme ihe ziri ezi mgbe niile. Ọ dịkwa ike. Ndị niile na-ewesa ya iwe ga-eji ihere bịa n’ihu ya. 25 Ụmụ* Izrel niile ga-ahụ na ọ dị mma na ha na-efe Jehova.+ Ha ga-ejikwa ihe ndị ọ na-emere ha na-eme ọnụ.’”
^ Na Hibru, “tọpụ ndị eze ihe ha kere n’úkwù.”
^ Na Hibru, “M ga-eke gị ihe n’úkwù.”
^ Ma ọ bụ “Onye kpụrụ.”
^ Ma ọ bụ “Onye kpụrụ ya.”
^ O nwere ike ịbụ, “Ka ụrọ ò kwesịrị ịsị: ‘Ihe ị kpụrụ enweghị aka’?”
^ Ma ọ bụ “Ọ̀ bụ ime gịnị na-eme gị?”
^ O nwere ike ịbụ, “Ndị ọrụ.”
^ O nwere ike ịbụ, “ndị ahịa.”
^ O nwere ike ịbụ, “ka ọ tọgbọrọ nkịtị.”